Canab guryo ah xilliga qaboobaha | December 2019
Ugu Weyn Ee Canab guryo ah xilliga qaboobaha
Waxaan si toos ah u qabannaa canab si loogu diyaariyo jiilaalka!
Diyaargarowga saxda ah ee "prewinter" oo kaliya ayaa hubin karta jiilaalka caadiga ah ee beertii canabka ah. Waa lagama maarmaan in la diyaariyo horey u bilawga bilawga cimilada qabow. Frost waxay si gaar ah u burburiyaan caleemaha sannadlaha ah ee aan qaan gaarin. Shaqada beerka waa in la hubiyo in koritaanka dhan ee sanadka hadda la kulmo bilawga ah ee dhaxan ugu dambeyntii bislaado.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Canab guryo ah xilliga qaboobaha 2019